(ကန်တော့) Ecee2 ဆေးဆိုတာ Levonorgestrel ပါတဲ့ အရေးပေါ် ကိုယ်ဝန်တားဆေး ဖြစ်တယ်။ မြန်မာ၊ အိန္ဒိယနဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတွေမှာ ဒီနာမယ်နဲ့ ရောင်းတယ်။ အမေရိကားမှာ Morning-after pill အပြင် Plan B, Plan B One-Step, Lo / Ovral, Cryselle, Orsythia, ella, Ogestrel, Low-Ogestrel-28, Myzilra,Falmina, Chateal, Kurvelo, CamreseLo, Low-Ogestrel-21, Lo / Ovral-28, Next Choice, Elinest, Amethia Lo, Ogestrel-28, Preven EC နာမည်တွေလဲ အများကြီးရှိတယ်။ Postcoital Contraception ဆိုတာ အရေးပေါ်ကိုယ်ဝန်တားဆေးကို ခေါ်တာဘဲဖြစ်တယ်။ International Consortium for Emergency Contraception ဝက်ဆိုက်မှာ ရေးထားတဲ့ အရေးပေါ်ကိုယ်ဝန်တားဆေး အချက်အလက်များ (မြန်မာနိုင်ငံ) ထဲမှာ ဒီလိုဖတ်ရတယ်။ • Registered LNG-EC products မှတ်ပုံတင်ထားသောဆေး အမျိုးအမည်များ = ECee2, Duet, Pill 72, Postinor, Postinor-2, Pregnon ဆေးလက်မှတ်ဖြင့်သာ ရောင်းသည်။ • အမျိုးသမီးများသုံးစွဲမှု ကိန်းဂဏန်းမရပါ။ • အမျိုးသမီးများ ဆေးအကြောင်းသိရှိမှု ကိန်းဂဏန်းမရပါ။ • Registered UPA-EC products မှတ်ပုံတင်တားသည့်ဆေး မရှိသေး၊ • Registered Mifepristone-EC Produ
Pills and Side effects တားဆေးရဲ့ ဘေးထှကျ-ဆိုးကြိုး ရှောငျနညျး
(ကနျတော့) ဆေးတိုငျးမှာ ဘေးထှကျ-ဆိုးကြိုးတှရှေိတယျ။ ဒီဆေးမြိုးက ဟျောမုနျးဖွဈလို့ တမြိုးထူးတယျ။ ဆိုးကြိုးတှဟော တခဏ-အမွဲတနျး၊ ခပျပေါ့ပေါ့-ခပျဆိုးဆိုး အမြိုးမြိုးရှိမယျ။ တယောကျမှာ ဖွဈပမေဲ့ ကိုယျ့မှာ မဖွဈတာလဲရှိမယျ။ အခု ရေးပွတာတှကေို ဒီဆေးသောကျသူ ၁% မှာသာ ခံစားရတယျ။ တခြို့က အလိုလို သကျသာသှားတယျ။ တခြို့ကို ပွုပွငျယူလို့ရနိုငျတယျ။ အဖွဈမနညျးတာတှေ – • ဗိုကျနာ၊ လပှေ၊ ပြို့၊ အနျ၊ • ဝကျခွံထှကျ၊ (ဆေးသောကျစ ပဌမ ၃ လမှာသာ အဖွဈမြား)၊ • ရငျသား နာ-တငျး-ရောငျ၊ • နရေောငျနဲ့ထိတဲ့ အရပွေားမှာ အညိုစကျလေးတှဖွေဈ၊ • ခေါငျးမူး၊ • ကိုယျမှေး နညျး-မြား၊ • လိငျစိတျ ပွောငျးလဲ (နညျး-မြား)၊ • ခွထေောကျရောငျ၊ • ခါတိုငျးနဲ့မတူ မောပနျး၊ • ကိုယျအလေးခြိနျ တကျ-ကြ၊ ရှားပါးပမေဲ့ ဖွဈလာရငျ ဆရာဝနျပွရမဲ့ ဘေးထှကျ-ဆိုးကြိုးတှေ – • ရငျသား အကြိတျ၊ • ရာသီလုံးဝမလာ၊ ရာသီ တခါတလမှေသာလာ၊ • ကွားရကျသှေးဆငျး၊ ရာသီသှေး နညျး၊ ရာသီဆငျးနတော ရကျပိုကွာ၊ • စိတျဓါတျကြ၊ • ဆေးလိပျသောကျတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ အသဲနရောနာ၊ အသားဝါ၊ • ဆီးခြိုရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ ဆီးခြို နညျးနညျးတကျ၊ • ခေါငျးကိုကျ၊ (မိုငျဂရငျး) ဖွဈ၊ • သှေးဖိအား နညျးနညျးတကျ၊ • ဗိုကျအပျေါပိုငျး
Pregnancy – Child birth ယောက်ျား ဖေါင်စီး၊ မိန်းမ မီးနေ
ကလေးမီးဖွါးရတာ ဘယ့်လောက် အန္တရာယ်များလဲဆိုတာကို တင်စားပြောလိုက်တဲ့ စကားပါ။ အတော်ကို မှန်ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံး ၁ နှစ် ၁ နှစ်၊ သန်းတဝက်မက ကလေးမီးဖွါးရင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ သေနေရဆဲပါ။ ဟိုအရင် ခေတ်ဟောင်း သမိုင်းမှာ ၁ဝဝ မှာ ၁ ယောက် သေနိုင်ခဲ့နိုင်တယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ၁၈ဝဝ ခုနှစ်များ ကတော့ အဆိုးဆုံးမို့ ၄ဝ%တောင် သေဆုံးရသတဲ့။ ၁၉ဝဝ ပြည့်နှစ်တွေမှာတော့ ၁% ရှိခဲ့တယ်။ ကလေးဖွါးရင်း မိခင်တွေ ဘာ့လို့ သေဆုံးရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမယ် Bleeding (Hemorrhage) သွေးသွန် (သွေးလွန်) တာက ထိပ်ဆုံးကပါ။ Sepsis ရောဂါပိုးဝင်တာက ဒုတိယ၊ Abortion ကိုယ်ဝန်ပျက်တာဖြစ်ဖြစ် ဖျက်တာဖြစ်ဖြစ် မှားလို့ သေရတာကလဲ ဒုတိယ အဆင့်နဲ့ အတူတူဘဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုံး ကိုယ်တွေရောင်၊ သွေးဖိအားတွေ တက်တဲ့ PET and Eclampsia ကိုယ်ဝန် သွေးဆိပ်တက်ရောဂါ ဆိုတာက တတိယလိုက်တယ်။ Obstructed labor မွေးလမ်းကနေ မမွေးနိုင်လို့က စတုတ္ထနေရာမှာ ရှိတယ်။ “ယောက်ျား ဖေါင်စီး၊ မိန်းမ မီးနေ” ဒီစကားက ပေါ်တာ ကြာပြီနဲ့ တူပါတယ်။ ကနေ့ခေတ်မှာ ကလေး မီးဖွါးရတာက အဲလောက် အဖိတ်အစင် မများတော့ပါ။ Antiseptics ပိုးသတ်ဆေးတွေ ပေါ်လာတာရယ်၊ Blood transfusion သွေးသွင်း ပေးနိုင်လာတာရယ်၊ ANC ကိုယ်ဝန်ဆေ
Pregnancy – Chromosome Analysis and Amniocentesis (ခရိုမိုဇုမ်း) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
Chromosome Analysis and Amniocentesis (ခရိုမိုဇုမ်း) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း နဲ့ ရေမြွှာရည်စစ်ဆေးခြင်း Chromosomes (ခရိုမိုဇုမ်း) ဆိုတာ လူတိုင်းရဲ့ သွေးနီဥကလွဲရင် (ဆဲလ်) တိုင်းမှာရှိတဲ့ မျိုးဗီဇဖြစ်တယ်။ (ဆဲလ်) တိုင်းမှာ ၄၆ ခု (၂၃ စုံ) စီရှိတယ်။ အဖေစစ်၊ အမေစစ်တွေဆီကနေ ရကြတာဖြစ်တယ်။ ၂၂ စုံကို Autosomes (အောတိုဇုမ်း) ခေါ်ပြီး ကျန်တဲ့တစုံကို ကျား-မဖြစ်တာကို ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ Sex chromosomes (ဆက်စ်-ခရိုမိုဇုမ်း) ခေါ်တယ်။ မ ဆိုရင် X sex chromosomes ၂ ခုပါမယ်။ ကျားဆိုရင် X sex chromosome တခုနဲ့ Y sex chromosome တခုပါတယ်။ (ခရိုမိုဇုမ်း) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆိုတာ ၄၆ ခုရဲ့ အရေအတွက်နဲ့ တည်ဆောက်ပုံကို လေ့လာတာ ဖြစ်တယ်။ Karyotype လို့လဲခေါ်တယ်။ အများအားဖြင့် သွေးဖြူဥ (ဆဲလ်) ထဲက ရှိတာကို ရေတွက်တယ်။ • ကလေး ဖွံ့ထွားမှုကို သံသယဝင်ရင်စစ်မယ်။ • ပုံပန်းတမျိုးဖြစ်နေရင် စစ်မယ်။ • မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက် ပါလာရင်စစ်မယ်။ • လိင်အင်္ဂါပုံမှန်မဟုတ်ရင် စစ်မယ်။ • ကလေးအသေမွေးတာ၊ မွေးမွေးချင်းသေတာ၊ ဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲ သိအောင်စစ်မယ်။ • ကလေးမရနိုင်သူ၊ ခဏခဏ ကိုယ်ဝန်ပျက်သူ၊ ရာသီတခါမှမလာသူကို စစ်မယ်။ • သားဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာ (မွေးမဲ့အချိန်မှာ)
Pregnancy (hCG) ကိုယျဝနျရှိ-မရှိစဈတဲ့ ဟျောမုနျး
ကိုယျဝနျ ရှိ-မရှိ စမျးတယျဆိုတာ ဆီးထဲမှာ Human Chorionic Gonadotropin (HCG/hCG) ချေါတဲ့ ဟျောမုနျး ရှိ-မရှိကို စဈတာ ဖွဈတယျ။ ကိုယျဝနျရှိလို့ ဖွဈလာတဲ့ အခငျြးကနေ HCG ဟျောမုနျးကို ထုတျပေးနတေယျ။ beta hCG (βhCG) လို့လဲရေးတယျ။ သှေးကို စဈတာလဲ ရှိတယျ။ တခြို့စဈနညျးက ဟျောမုနျး ရှိ-မရှိကိုသာ စဈပွီး တခြို့စဈနညျးတှကေ အတိအကြ သှေးထဲမှာ (hCG) ဘယျလောကျ ရှိနတေယျအထိ စဈရတယျ။ အထဲကကလေးမှာ ခြို့ယှငျးခကျြ ပါ-မပါကို သိနိုငျတယျ။ ကငျဆာတခြို့ ကနလေဲ မြားစတေယျ။ ဥပမာ Germ cell tumors မြိုး။ ယောကျြားတှမှော ကြား-အစေ့ ကငျဆာ ဖွဈနရေငျ တှမေ့ယျ။ Molar pregnancy ဆိုတဲ့ စပဈြသီး-ကိုယျဝနျဆိုလဲ အပေါငျးပွမယျ။ Choriocarcinoma ချေါတဲ့ ကငျဆာ ရှိနရေငျလဲ တှမေ့ယျ။ မ-မြိုးဥ နဲ့ ကြား-သုကျပိုးတှေ ထိတှေ့-ပေါငျးစပျပွီးနောကျ မြိုးစပျပွီးသားမြိုးဥဟာ ၉ ရကျအကွာမှာ သားအိမျပွှနျ ကနတေဆငျ့ သားအိမျထဲဝငျလာပွီး သားအိမျအတှငျးနံရံကို တှယျကပျတယျ။ အဲဒီနောကျမှာ အခငျြးဆိုတာ ဖွဈလာတယျ။ အခငျြးကနေ hCG ကို ထုတျပေးတော့မယျ။ သှေးထဲမှာ ပါနတေော့မယျ။ ဆီးထဲမှာလဲ ပါနတေော့မယျ။ မြိုးဥက သားအိမျ အတှငျးနံရံကို လာတှယျအပွီး ၆ ရကျကွာရငျ စဈတော့တှမေ့ယျ။ ကိုယျဝနျ ၈၅% မှ
သမီးကိုယ်ဝန် ၅လရှိပါပြီ၊၊ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ၁ လပိုင်းမှာ သွေးစစ်တော့ ဘီပိုးရှိတာစသိပါတယ်။ အကောင်အရေအတွက်က ၅ဝဝ အောက်ပဲရှိလို့ ဘာဆေးမှမသောက်ရပါဘူးဆရာ။ အခု ကိုယ်ဝန်ရှိနေတော့ ကလေးကိုမကူးအောင် ဘာတွေ လုပ်ရမလဲဆရာ။ နောက်ပြီး မွေးပြီးရင် နို့တိုက်လို့ရလားဆရာ။ ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိလို့ညွှန်ကြားပေးပါအုံးဆရာ။ ဘီပိုးရှိနေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယောက်လာပြတယ်။ မကြာခင်မွေးမယ်။ ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်းထိုးဘို့ ကာကွယ်ဆေးတမျိုး ရှာဝယ်ထားဘို့ ဆေးလက်မှတ်ရေးပေးပြီး ကူးစက်နိုင်ပုံတွေကို ရှင်းပြလိုက်တယ်။ သူပြောမှ ပြန်သတိရတယ်။ အရင်ကလေး သားဦးတုံးကလဲ ဘီပိုးရှိလျှက်နဲ့ ဆရာဘဲမွေးပေးခဲ့တာတဲ့။ အရင်တခါဝယ်တာ ရူးပီး ၅ဝဝဝ ပေးရသတဲ့။ အင့်း့ သည်တခါလဲ အထူးသတိထားပြီး မွေးပေးရအုံးမှာဘဲ။ သည်တယောက်မွေးပြီးရင်တော့ ခြာထားပါကွာလို့ အကြံပေးလိုက်ရတယ်။ သူ့အသက်ကလဲ ငယ်သေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိရင် ဘီပိုး ရှိ-မရှိ စစ်ရပါမယ်။ ခင်ပွန်း၊ အဖေါ်ယောက်ျားမှာ ဘီပိုးရှိရင်၊ ကိုယ်က ဆေးရုံ-ဆေးခန်း-ဓါတ်ခွဲခန်း၊ ကျန်းမာရေးဌာနမှာအလုပ်လုပ်ရင် ဘီပိုး ရှိ-မရှိ စစ်ဘို့ သူများတွေထက်လိုတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံး မိခင်လောင်းမှာ ဘီပိုး ရှိနေတယ်ဆိုရင် ကလေးမွေးဖွါးနေတုံး ကလေးဆီကို
HIV ပိုး ရှိနေသူ ယောက်ျားနှင့် ပိုးမရှိသူ မိန်းမတို့ လိင်ဆက်ဆံပြီး ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ရင် ကလေးမှာ ကူးစက်နိုင်ပါသလား။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ ရ/မရ သိချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါသလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်း HIV ရှိ-မရှိ စမ်းသပ်ရမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာစကတည်းက ပိုးရှိနေတာသိရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘို့ ပိုကောင်းတယ်။ ကလေးကို မကူးစေအောင်ဆောင်ရွက်ဘို့ အချိန်ပိုရလို့ကောင်းတယ်။ သူ့ခင်ပွန်းအတွက်လဲ မတူးအောင် လုပ်ဘို့လိုတယ်။ ပိုးဟာ သွေး၊ ကိုယ်ခန္ဓာကထွက်တဲ့အရည် (ယောက်ျား စီမင်၊ မိန်းမ ဗဂျိုင်းနား အရည်၊ နို့ရည်) တွေနဲ့ ပိုးရှိမိခင်ကနေ မွေးလာမဲ့ကလေးကို ကူးနည်းတွေနဲ့ ကူးစက်တယ်။ လိင်လမ်းကနေကူးတာကအများဆုံးဖြစ်တယ်။ အများဆုံးစမ်းသပ်နည်းဟာ HIV antibody test (အင်တီဘော်ဒီ) ရှိ-မရှိ စမ်းနည်းဖြစ်တယ်။ သွေး၊ ဆီး နဲ့ ခံတွင်းက အရည်တွေကို စမ်းတယ်။ ပဌမနည်းနဲ့စမ်းလို့ အပေါင်းပြတယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် တခြား (အင်တီဘော်ဒီ) စမ်းနည်းတခု ထပ်လုပ်ရတယ်။ ဒီနည်းကို Confirmatory HIV test နည်းလို့ခေါ်တယ်။ အဖြေရအောင် ရက်နဲနဲတော့ အချိန်ယူရတယ်။ တချို့ ခံတွင်းအရည်စမ်းနည်းကတော့ နာရီပိုင်းသာကြာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံး ပိုးတွေ့သူလဲ ကျန်းမာနေအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ကလေ
Pregnancy and Prednisolone ကိုယျဝနျနှငျ့ ပရကျနဆိုလုံးဆေး
ဆရာရှငျ့ ဆရာဝနျက Prendisilone ပေးပါတယျ။ သမီးက ကလေးယူဖို့ အစီအစဉျ ရှိပါတယျ။ ထိုဆေးမြားကွောငျ့ ကလေးမှာ effect ရှိနိုငျပါသလား။ ကလေးယူနခြေိနျတှငျ မညျသညျ့ဆေး ပွောငျးသောကျရမလဲ။ Prednisolone ဆိုတာ (စဆီရှိုကျ) ဆေးဖွဈတယျ။ လူ့ကိုယျရဲ့ ရောငျရမျးခွငျးဖွဈစဉျ ဆိုတာကို တားဆီးပေးတယျ။ ဆေးအနနေဲ့ နရော အမြားကွီးမှာ သုံးတယျ။ Allergic disorders (အလာဂြီ) ရတာတှေ၊ Skin conditions နာတာရှညျအရပွေားနာတှေ၊ Ulcerative colitis နာတာရှညျအူရောငျတာ၊ Arthritis အဆဈနာရောဂါ၊ Lupus, Psoriasis နဲ့ Breathing disorders တှပေါဝငျကွတယျ။ ဆရာဝနျက မညှနျးဘဲ ဆေးမသောကျသငျ့ဘူး။ ဆရာဝနျပွောတဲ့အတိုငျးလဲ အတိအကလြိုကျနာရမယျ။ ရောဂါဆိုးတခုခု ရှိနတော၊ ကိုယျပူတာ၊ (အငျဖကျရှငျ) ဝငျတာ၊ ခှဲစိတျကုသထားတာ၊ စတာတှရှေိသူမြား အထူးသတိထားရမယျ။ ဥပမာ Immune system ခုခံစနဈကို သကျရောကျစလေို့ (အငျဖကျရှငျ) ရနတောက ဆိုးလာနိုငျတယျ။ ဆေးသောကျနတေုံး ကာကှယျဆေး မထိုးသငျ့ဘူး။ ဆေးကို ခကျြခငျြးရပျမပွဈသငျ့ဘူး။ အသဲခွောကျရောဂါ၊ ကြောကျကပျရောဂါ၊ လညျပငျးကွီးရောဂါ၊ ဆီးခြိုရောဂါ၊ ငှကျဖြား၊ တီဘီ၊ အရိုးရောဂါ၊ ကွှကျသားရောဂါ၊ မကျြစိတိမျ၊ အတှငျးတိမျ၊ မကျြစိရယေုံ၊ အစာအိမျလနော၊ အူနာ၊ စိ
ကိုယျဝနျ ၃ လကြျောရှိနပေါပွီ။ RA ရှိတော့ အဆဈတှကေ အမွဲတမျး ရောငျပွီးနာနပေါတယျ။ ဒူးက အဆိုးဆုံးဘဲ။ Alaxan တနတေ့ခွမျးသောကျမှ နလေို့ထိုငျလို့ ရပါတယျ။ ကိုယျဝနျ ၃ လကြျောမှ စသောကျပါတယျ။ ဆရာဝနျကတော့ Alaxan သောကျလို့ရတယျလို့ ပွောတယျ။ Alaxan နဲ့ မရရငျ Medrol (Methylprednisolone) ပွောငျးပေးမညျလို့ ပွောပါတယျ။ OG ကတော့ Alaxan ၅ ရကျထကျ ပိုမသောကျနဲ့လို့ ပွောတယျ။ အထကျပါဆေးတှကွေောငျ့ ကလေးမှာ မညျကဲ့သို့သော Side Effect ဖွဈနိုငျပါသလဲ။ ဆေး ၂ မြိုးလုံးကနေ ယဘေယြ ကိုယျဝနျကို ပွဿနာ မဖွဈစပေါ။ (၁) Alaxan = Ibuprofen Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (စတီရှိုကျ) မပါ အနာသကျသာဆေး အမြိုးအစား ဖွဈတယျ။ အသုံးမြားတယျ။ ဆေးတိုငျးမှာ ရှိသလို သတိထားစရောတှေ မကငျးပါ။ ဒီဆေးမှာ Heart attack or Stroke နှလုံးနဲ့ ဆိုငျတာကို အထူးသတိထားရတယျ။ NSAIDs တှကေနေ အစာအိမျအနာ၊ သှေးယိုတာတှကေ အမြားဆုံးဖွဈတတျတဲ့ ဘေးထှကျ-ဆိုးကြိုးဖွဈတယျ။ • Prescription Ibuprofen ဆေးလကျမှတျနဲ့ဝယျရတာမြိုးကို Pain, Tenderness နာတာ၊ Swelling ရောငျတာ၊ Osteoarthritis အရိုးရောငျလို့နဲ့ Rheumatoid arthritis (ရူမကျတဈ) အဆဈတောတှမှော တငျးခဲနတောတှေ သကျသာစဘေို
Pregnancy and S (3) ကလေးဖွါးပြီး အတူနေခြင်း
• LSCS (CS) ဗိုက်ခွဲမွေးပြီးနောက် လင်-မယားအတူနေတာ တလခွဲ (၆) ပါတ်စောင့်ပါလို့ ဆရာဝန် အများဆုံးက အကြံပေးပါတယ်။ • ချုပ်ရိုးလဲကောင်း၊ ကလေးအမေလဲ နေကောင်းနေမှ ဒီရက်ကို ပြောတာပါ။ • မဟုတ်ရင် ၈-၁၂ ပါတ်ထိ စောင့်ရပါမယ်။ • အနေအထားလဲ ရွေးရင် ကောင်းပါတယ်။ • ရိုးရိုးလမ်းကနေ ကလေးဖွါးပြီးနောက် ဘယ်တော့ ပြန်ဆက်ဆံနိုင်သလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဆရာဝန်မဟုတ်သူတွေလဲ ဖြေတတ်ပါတယ်။ Folk wisdom လို့ ခေါ်တယ်။ သုတေသနလုပ်ပြောရတာ မဟုတ်ဘူး။ • ကာယကံရှင် အမျိုးသမီးကို ဆုံးဖြတ်စေသင့်တာ တရားမျှတတယ်။ သူက စောနိုင်တယ်ဆိုရင် ရတာပါ။ • ဒါ့ကြောင့် ၃ ပါတ်လို့ Williams Obstetrics က အကြံပြုတာရှိတယ်။ နောက်ကျချင်သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ • ခွဲမွေးတာ မဟုတ်ဘဲ မွေးလမ်းကနေ မွေးပေမဲ့ Episiotyomy လမ်းကြောင်း ချဲ့မွေးရတာ၊ Tear and repair လမ်းကြောင်း စုတ်လို့ ချုပ်ရတာ၊ Forceps delivery ညှပ်ဆွဲမွေးတာ၊ Vaccum လေစုပ်ကရိယာသုံး မွေးတာတွေကိုပါ ထည့်စဉ်းစားရမယ်။ • နောက်ပြီး Lochia လို့ ခေါ်တဲ့ မွေးဖွါးပြီးဆင်းတာက အနီရောင်ကနေ ပန်းရောင်ဖြစ်လာရင်ပြီး နည်းလာရင် သိပ်ကိစ္စမရှိတော့ပါ။ • ပုံမှန်အားဖြင့် ၂ ပါတ် ဆိုရင် အဲလိုဖြစ်လာပါပြီ။ ဆင်းတာကများမယ်၊ အနံ့အသက်ရှိမယ်၊ ဖျားနေ
ကိုယ်ဝန် နောက်ဆုံး ၃ လမှာ အအိပ်ပျက်တာ များကြတယ်။ နုသေးရင် မေးတဲ့သူ ပြောသလိုဘဲ။ ကာယရော စိတ်ရော အကြောင်းခံတွေကနေ အိပ်ရေးကို ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ ကြွက်တက်တာ။ ဆီးထသွားချင်တာ၊ အလွန်ဆော့တဲ့ အထဲက ကလေး၊ ကိုယ်ဝန် အရွယ်အစား ကြီးလာလို့ ဘယ်-ညာလှည့်တိုင်း နိုးလာတာ၊ ခါးနာတာ၊ အိပ်မက်၊ မွေးဖွါးရမှာကို ကြိုပြီး ကြောင့်ကျစိတ်ဝင်တာ။ ကြွက်တက်တာ သက်သာအောင် ခြေပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းလို လှုတ်ရှားမှုမျိုး အမြဲလုပ်ပါ။ Calcium ဆေးသောက်ပေးပါ။ အိပ်ရင် တဖက်စောင်း၊ ဒူးကွေးအိပ်ပါ။ ခါးနာ သက်သာအောင် ခေါင်းအုံးပို လိုတဲ့နေရာမှာ သုံးပါ။ ဆီးထမသွာရအောင် အိပ်ခါနီး ရေ-အရည် (ကော်ဖီ၊ လဖက်ရည်) လျှော့သောက်ပါ။ နေ့ခင်းမှာ ပိုသောက်ဘို့ မမေ့ပါနဲ့။ Two-ply sheet with two glossy sides စပါယ်ရှယ် အိပ်ယာခင်းသုံးပါ။ မအိပ်ခင် တီဗွီကြည့်တာ၊ စာဖတ်တာတွေထဲ စိတ်ထိခိုက်၊ အနှောင့် အယှက် ပြုမှာတွေ ရှောင်ပါ။ စိတ်ငြိမ်နည်း၊ ပုတီးစိတ်၊ တရားထိုင်၊ ချည်ထိုး၊ ရေနွေးချိုး၊ သာယာညင်သာတဲ့ တေးဂီတ။ Food and Drug Administration (FDA) ကနေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာ လုံးဝစိတ်ချရတဲ့ အိပ်ဆေးရယ်လို့ အာမခံတာ မရှိသေးပါ။ • Benadryl နဲ့ Ambien တွေကို Class B medications လို့ သတ်မှတ်ထားတ
Pregnancy and Ultrasound ကိုယျဝနျဆောငျ (အာလျထှာဆောငျး)
(အာလျထှာ-ဆောငျး) ရိုကျစဈဆေးနညျးဟာ စိတျခရြတယျ၊ အကုနျအကြ မမြားဘူး၊ တိကတြယျလို့ လကျခံထားကွတာမို့ ကိုယျဝနျဆောငျမြားအတှကျ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ သုံးကွတယျ။ ဘာတှေ သိခငျြလို့ပါလဲ။ ၁။ ကိုယျဝနျရှိတာ သခွောသိမယျ။ သန်ဓကေိုဖုံးထားတဲ့ အိတျကလေး Gestational sac ကို ရကျသတ်ကပါတျ ၄ ပါတျခှဲမှာ စမွငျရပွီ။ သန်ဓဟော သားအိမျထဲမှာ ရှိနတော ဟုတျ-မဟုတျလဲ သခွောသိနိုငျတယျ။ ၂။ ကိုယျဝနျရှိစဉျ သှေးဆငျးရငျ ပကျြလမေလား သိနိုငျတယျ။ ၆-၇ ပါတျဆိုရငျ Doppler ultrasound နဲ့ ကလေး နှလုံးခုနျသံကို သိနိုငျပွီ။ ဒါဆို ၉၅% မက ကိုယျဝနျက ကောငျးတယျ။ ကလေးနှလုံးခုနျသံဟာ ကိုယျဝနျ အနု-အရငျ့ လိုကျ ပွောငျးတယျ။ ၁ လခှဲတုနျးက ၁ မိနဈမှာ ၉ဝ-၁၁ဝ ရှိတယျ။ ၉ ပါတျကစပွီး မှေးတဲ့အထိ ၁၄ဝ-၁ရဝ ရှိလာတယျ။ ၃။ ကိုယျဝနျ ဘယျလောကျ ရငျ့နပွေီလဲသိမယျ။ သန်ဓသေား အရှယျအစားဟာ ရငျ့လေ ကွီးလဖွေဈတယျ။ (က) Crown-rump length (CRL) ခေါငျးထိပျကနေ အောကျခွအေထိ ဘယျလောကျ ရှညျသလဲဆိုတာ ၇-၁၃ ပါတျမှာ အတိအကြ သိရပွီ။ (ခ) Biparietal diameter (BPD) ခေါငျးဘေးနှဈဘကျ အကှာအဝေး၊ ၁၁ ပါတျ မှာ ၂ဝ ကနေ မှေးတော့မယျဆိုရငျ ၉ဝ-၁ဝဝ မီလီမီတာ ရှိတယျ။ (ဂ) Femur length (FL) ပေါငျအရှညျ ၁၁ ပါတျမှာ ၁၊ မှေးခါနီးရငျ
Pregnancy Pains ကိုယျဝနျဆောငျ ဝဒေနာ
ကိုယျဝနျဆောငျတာနဲ့ အရငျလိုမဟုတျတော့ဘူး။ ခံစားရမှာတှေ ရှိလာမယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျတှကေ တယောကျနဲ့ တယောကျ၊ တခါနဲ့ တခါ မတူကွပါ။ အခုရေးတာမှနျသမြှ ကိုယျလဲ ခံရမယျ မထငျစလေိုပါ။ သကျသာအောငျ ဘယျလို လုပျမလဲဆိုတော့ – ၁။ Pregnancy Breast Changes ရငျသားအပွောငျးအလဲမြား၊ • ရငျသား ထှားထှားလာမယျ။ အထဲက နို့ရညျထှကျမဲ့ (ဂလငျး) လေးတှကွေီးလာ၊ အဆီတှမြေားလာလို့ပါ။ • တခြို့မှာ နာမယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျကာစနဲ့ ကလေးဖှါးခါနီးမှာ သိသာတယျ။ • သှေးကွောတှလေဲ မြားတာလို့ ပွာစိမျးစိမျးသှေးကွောလေးတှမွေငျလာရမယျ။ • နို့သီးအရောငျလဲ ရငျ့လာ၊ မဲလာမယျ။ • Colostrum ဆိုတဲ့ ကနဦး-နို့ရညျထှကျနိုငျတယျ။ ဒါတှအေားလုံးက ပုံမှနျအပွောငျးအလဲတှသောဖွဈတယျ။ • Bra (ဘရာ) ခြောငျတာသာ ဝတျပါ။ မ-တငျပေးနိုငျအောငျတော့ ဖွဈပါစေ။ (ကျောတှနျ) နဲ့ သဘာဝပစ်စညျးနဲ့ လုပျတာသာ ဖွဈပါစေ။ ကိုယျဝနျရငျ့လာတာနဲ့အမြှ (ဘရာ) အရှယျအစား ကွီးကွီးလာဘို့လိုမယျ။ နရေ့ော ညပါဝတျထားပါ။ နို့ရညျကွညျထှကျနရေငျ (ဘရာ) အတှငျးမှာ ဂှမျးစခံထားပါ။ စိုလာရငျ အသဈလဲပါ။ • နို့သီးထိပျကို ရခေပျနှေးနှေးနဲ့သာ ဆေးကွောပေးပါ။ ရခြေိုးခြိနျကလှဲရငျ ဆပျပွာမသုံးပါနဲ့။ ခွောကျသှစေ့တေယျ။ ၂။ Pregnancy Fatigue ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ
Pregnancy Prenatal Tests ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စမ်းသပ်ရမဲ့ စစ်ဆေးနည်းများ
မွေးလာတော့မဲ့ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကြိုတင်သိချင်ရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကတည်းက စမ်းသပ်လို့ရတာတွေရှိတယ်။ အကုန်လုံး မဟုတ်တောင်မှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ ကလေးရဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေကို ကြိပြီးသိထားနိုင်တာမို့ လိုတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားနိုင်မယ်။ မွေးတဲ့အခါ၊ မွေးပြီးနောက် သတိထားရမှာတွေလဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်တယ်။ မွေးရာပါ လက်မခံနိုင်လောက်တဲ့ ချို့ယွင်းချက်ရှိနေတာဆိုရင် တရားဝင်လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ နေရာတွေမှာ ကိုယ်ဝန် ဖျက်ပြစ်နိုင်တယ်။ 1. Human chorionic gonadotropin (hCG) ကိုယ်ဝန်ရှိပြီး အချင်းဖြစ်လာရင် အချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ (hCG) ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်း ထွက်လာတယ်။ သွေးကိုလဲ စစ်နိုင်တယ်။ ဆီးကိုလဲ စစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိဆီးစစ်တယ်ဆိုတာ ဒီဟော်မုန်း ပါနေ-မနေစစ်ရတာဖြစ်တယ်။ေ]ာ်မုန်း ရှိနေတာ သာမကဘဲ အနည်း-အများလဲ စစ်သင့်တယ်။ အမွှာကိုယ်ဝန်ဆိုရင် များနေမယ်။ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက် တချို့ကိုစစ်ရင် ဒီနည်းကိုပါ တွဲလုပ်ရတယ်။ Down syndrome (ဒေါင်းန်-ဆင်ဒရုမ်း) ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်ချို့ယွင်းချက်နဲ့ကလေး ရှိနေရင် ဒီဟော်မုန်း များနေမယ်။ 2. Alphafetoprotein (AFP or triple) screening သွေးကိုစစ်တယ်။ Fetal neural tube defects
Pregnancy Signs ကိုယျဝနျရှိခွငျး လက်ခဏာ (၂ဝ)
(ကနျတော့) ကိုယျဝနျရှိခွငျး လက်ခဏာတှကေို တခြို့မှာ ဘာမှမခံစားရဘူး။ တခြို့ကွ လူမမာကွီးလို အတျောခံစားရတယျ။ ကိုယျဝနျရှိခွငျး လက်ခဏာ (၂ဝ) ၁။ ရာသီမလာတော့ပါ၊ ဒါပမေဲ့ ပေါငျးစပျပွီးသား မြိုးဥက သားအိမျ အတှငျးဆုံးလှာကို လာပွီးတှယျကပျခြိနျမှာ သှေးနဲနဲ စှနျးမယျ။ ဆီးစပျနရောကလဲ နာတာခံစားရနိုငျတယျ။ ရာသီလာလို့နာတာနဲ့ ခှဲခွားရမယျ။ မြိုးဥထှကျခြိနျဆိုတာ (လလညျရကျ) နဲ့ ၆-၁ဝ ရကျမှာဖွဈတယျ။ ၂။ ကိုယျ့ကိုယျကို ကိုယျဝနျရှိနတေယျလို့ထငျခွငျး၊ ၃။ ပြို့-အနျခွငျး၊ အစားမစားခငျြဖွဈလာခွငျး၊ ၄။ အတူနခေငျြစိတျ ပွောငျးလဲလာခွငျး၊ ၅။ ရငျသားနာခွငျး၊ ၆။ ရငျသား ပိုကွီးထှားလာခွငျး၊ ၇။ ရငျသား အရောငျရငျ့အဝိုငျးမှာ အသီးငယျလေးတှေ ထှကျလာခွငျး၊ ရှိပွီးသားတှကေ ပိုပွီးသိသာလာခွငျး၊ ၈။ ညှဈရငျ နို့ရညျကွညျ နဲနဲထှကျနိုငျခွငျး၊ ၉။ ဆီးခဏခဏသှားရခွငျး၊ ကိုယျဝနျဆောငျ အမြားစုက ၆-၈ ပါတျမှာ ဖွဈကွတယျ။ ဆီးလမျးပိုးဝငျတာ၊ ဆီးခြိုရောဂါ နဲ့ ဆီးသှားစတေဲ့ဆေးတှကွေောငျ့လဲ အဲလို ဆီးခဏခဏသှားခငျြတာနဲ့ ခှဲခွားရမယျ။ ၁ဝ။ ခငျြခွငျးတပျခွငျး၊ ၁၁။ အားကုနျခွငျး၊ ၁၂။ အသားအရပွေောငျးလဲလာခွငျး၊ ၁၃။ မတျတတျရပျလိုကျရငျ ခေါငျးမူးမယျ၊ သတိလဈခငျြသလိုဖွဈမယျ။ ၁၄။ ဆီး-သှေးစဈလြ
Simple Foreign Body Removal from the Eye မျက်စိဒဏ်ရာ
မဂ်လာပါ (မင်္ဂလာပါ) ဆရာ အသက်က ၂၇ပါ ယောကျာ်လေးပါ အိမ်ထောင်မရှိပါဆရာ နှလုံးရောဂါအခံတော့ ရှိပါတယ်ဆရာ cutter ဖြတ်ရင်းမျက်လုံးထဲ သံစဝင်သွားပြီးပွတ်မိရာမှ ထောင့်စွန်း ကွဲသွားပါတယ်ဆရာ အောက်မျက်ခမ်းစပ်ကိုလှန်ရင်အရမ်းနာကျင်ပြီးစပ်ပါတယ်ဆရာ ဖြစ်တာ၃ရက်ရှိပါပြီ ငွေကြေးမတတ်နိုင်တော့ ဆေးခန်းမပြနိုင်လို့ပါဆရာ အန္တာရယ် (အန္တာရာယ်ရှိ) ရှိပါသလား ဘယ်လိုဆေးမျိုး သောက်ရပါမလဲဆရာ ဘယ်လိုမျက်စဉ်းမျိုးခပ်ပြီး ပြု့မှု (ပြုမူ) နေထိုင်ရပါမလဲဆရာ မျက်စိမှာ အနက်ရောင်အဝိုင်းနေရာက အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ အဖြူရောင်နေရာ အရေးမကြီးလှပါ။ မျက်ခွံအထက်အောက်က တခြားအရေပြားနေလို သဘောထားနိုင်တယ်။ မျက်စိထဲတခုခုဝင်ရင် ရေများများနဲ့ ဆေးရမယ်။ အတင်းမပွတ်ရ။ ဖုံ၊ သစ်သားစ၊ သဲမှုန်စတာဝင်ရင် မှန်ထဲကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင် အဝတ်စသန့်သန့်အစထောင့်စွန်းလေးနဲ့ ဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ သံစဆိုရင် ပိုးသန့်ထားတဲ့ အပ်အဖျားနဲ့ ဖယ်ရမယ်။ Topical Lidocaine 4% ထုံဆေးမျက်စဉ်း ၂-၃ စက်နဲ့ရမယ်။ Ciprofloxacin Eye Drop ပိုးသေဆေးပါမျက်စဉ်းတခုခုလိုမယ်။ မျက်ခွံအတွက် ပိုးသေဆးကို Tetracycline, Chloramphenicol Eye Ointment ကော်မျက်စဉ်း တခုခု သုံးနိုင်တယ်။ အနက်ရောင်အဝိုင်းအတွက် ပိုသတိထား
Pregnancy Stages ကိုယျဝနျဆောငျ အဆငျ့မြား
ကိုယျဝနျဆောငျတာ (LMP) နောကျဆုံးရာသီလာတဲ့ရကျကနေ စတှကျရငျ ပမျြးမြှ ရကျသတ်တပါတျပေါငျး (၄ဝ) ကွာတယျ။ Trimesters (၃) လ စီ (၃) ပိုငျးခှဲခွားလလေ့ာတယျ။ ပဌမ ၃ လ၊ ဒုတိယ ၃ လ နဲ့ တတိယ ၃ လ ဆိုပွီး အပိုငျးခှဲမှတျသားရတယျ။ 1. ပဌမ ၃ လဆိုတာ သန်ဓစေတညျ့ခြိနျကနေ နောကျ ၁၂ ပါတျအထိချေါတယျ။ 2. ဒုတိယ ၃ လက ၁၃ ပါတျကနေ ၂၇ ပါတျအထိ၊ 3. တတိယ ၃ လက ၂၈ ပါတျကနေ မှေးတဲ့အထိ။ ၁-၁၂ ပါတျ ကိုယျဝနျ မိခငျလောငျးမှာ ဘာတှပွေောငျးလဲလာသလဲ • ဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲတှကွေောငျ့ ကိုယျခန်ဓာ စနဈတိုငျးလိုလိုမှာ အပွောငျးအလဲတှေ အမြားကွီးဖွဈလာစတေယျ။ • လစဉျရာသီ မလာတော့ဘူး။ • စိတျပိုငျးရော ရုပျပိုငျးမှာပါပွောငျးလာတယျ။ • မောပနျးလှယျမယျ။ • ရငျသား နာတယျ၊ ပိုကွီးထှားလာမယျ။ • နို့သီးထိပျဖြားလဲ သိသိသာသာဖွဈလာမယျ။ • အစာမကသြေလိုဖွဈလာမယျ။ ပြို့ခငျြ-အနျခငျြဖွဈမယျ။ • Morning sickness ချေါကွတယျ။ • အစားအစာ တမြိုးမြိုးကို တပျမကျမှု ခဉျြခွငျးတပျတာ ဖွဈနိုငျတယျ။ • စိတျမူ ပွောငျးလာနိုငျတယျ။ • ဝမျးခြုပျတတျတယျ။ • ဆီးခဏခဏသှားခငျြမယျ။• ခေါငျးကိုကျမယျ။ • ရငျပူမယျ။ • ကိုယျအလေးခြိနျတိုးလာမယျ။ အနျတာ၊ အစာမစားခငျြတာမြားရငျ အလေးခြိနျကနြိုငျတယျ။ • စားခြိနျ၊ အိပျခြိနျတှေ ပွော
Pregnancy, LSCS and Anesthesia ဗိုက်ခွဲမွေးတာ ဘယ်မေ့ဆေး သုံးမှာလဲ
ဗိုက်ခွဲမွေးတာမှာ အများဆုံးသုံးကြတာက Spinal anesthesia (SA) ခါးထုံဆေးဖြစ်တယ်။ မေ့ဆေး General anesthesia (GA) လဲ သုံးတတ်သလို ရိုရိုး ထုံးဆေး Local anesthesia (LA) လဲ သုံးရတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ Epidural နည်းကတော့ ခါးထဲကို ထုံဆေး တောက်လျှောက်သွင်းထားရင် ခွဲတယ်။ မခွဲဘဲလဲ မွေးလမ်းကမွေးရင်လဲ လုံးဝမနာအောင် ဒီနည်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ LA ရိုးရိုး-ထုံဆေးက ဆေးထိုးတဲ့ နေရာလေးမှာသာ ကွက်ပြီး ထုံနေမယ်။ နာတယ်ဆိုတာ အရေပြားကသာ နာတာ။ အဆီ၊ ကြွက်သား၊ အရွတ်ပြားတွေက မနာလို့ ထုံဆေး မလိုဘူး။ အရိုးဆိုတာတောင် မနာဘူး။ ဗိုက်ဖွင့်ရင် ဗိုက်အတွင်းမှာ ရှိရှိသမျှကို ဖုံးပေးထားတဲ့ အလွှာပါးပါးလေး ရှိတယ်။ သူက နာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒီနေရာကို မထိ-မကိုင်-အခွဲခင် ထုံဆေးထပ်ထိုးရအုံးမယ်။ နောက်ပြီး သားအိမ်ကို ဖုံးနေတဲ့ အဲဒီအလွှာနဲ့ တဆက်ထဲ အဖုံးကလဲ အတူတူဘဲမို့ မနာအောင် ဒါးရာပေးမဲ့ နေရာကို ထုံဆေး ထပ်ထိုးရမယ်။ ထုံဆေးနဲ့ မတည့်သူကလွဲရင် ဘာမှ ပြသနာမရှိဘူး။ တခုတော့ ရှိတယ်။ ထိတာ-ကိုင်တာမှာ မေ့နေသူလိုတော့ မဟုတ်ဘူး သိနေမယ်။ နဲနဲနာမယ်။ စိတ်လှုတ်ရှားသူတွေက မခံနိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အိပ်ဆေးပါ ထိုးတတ်တယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး အနည်းဆုံးဖြစ်တယ်။ မခွဲခင် ကြိုတ
ခိုများအား အစာပြ၍ အလစ်တွင် တုတ်နှင့် တအားကုန် ရိုက်လိုက်ရာ မိမိလက်ကိုသာ ထိမိသောဟူ၏။ တကြိမ်တင်ထားပြီး။ ထပ်ပို့သူ ကျေးဇူး။ ဒေါက္တာတင့်ဆြေ
Powerful Speech နှုတျကောငျးလြှငျ ပွညျစိုး
စကားအမြိုးအစားမြား • အပွဈဖွဈသောစကား၊ • ဝါကွှား၍ပွောသောစကား၊ • အနိုငျအထကျပွောသောစကား • ခြီးမှမျးစကား။ စကားပုံမြား • စကားကြှံသျော နုတျမရ၊ • စကားစကား ပွောပါမြား စကားထဲကဇာတိပွ၊ • စကားနောကျ တရားပါ၊ • ဝစီဗဒေ ထိတိုငျးရှ၊ • နှုတျခြို သြှိုတဈပါး၊ • နှုတျကောငျးလြှငျ ပွညျစိုး၊ • နှုတျကွောငျ့သေ လကျကွောငျ့ကွေ၊ ဝစီဒုစရိုကျ (၄) ပါး (၁) မုသာဝါဒါ = မဟုတျမမှနျသောစကားကို ပွောဆိုခွငျး၊ (၂) ပိသုဏဝါစာ = သူနှဈဦးအခဈြကို ပကျြအောငျ ကုနျးခြောခွငျး၊ (၃) ဖရုသာဝါစာ = ကွမျးတမျးသဖွငျ့ နားမခံသာတဲ့စကားကို ပွောဆိုခွငျး၊ (၄) သမ်ဗပ်ပလာပဝါစာ = နိဗ်ဗာနျမှ ဖီလာဖွဈသော သိမျဖဉျြးသောစကားကို ပွောဆိုခွငျး၊ စကားအရာ အင်ျဂါ ၁ဝ ပါး (၁) ကာလဝါဒီ = ပွောဆိုခြိနျပွောခှငျ့သငျ့မှ ပွောဆိုခွငျး၊ (၂) ဘူတဝါဒီ = ဟုတျမှနျသော စကားကိုသာ ပွောဆိုခွငျး၊ (၃) ဓမ်မဝါဒီ = တရားနှငျ့စပျသညျကိုသာ ပွောဆိုခွငျး၊ (၄) အတ်တဝါဒီ = အကြိုးနဲ့စပျသညျကိုသာ ပွောဆိုခွငျး၊ (၅) ပိယဝါဒီ = ခဈြဖှယျသော စကားကိုသာ ပွောဆိုခွငျး၊ (၆) မိဟိတပုဗ်ဗဘာဏီ = ပွုံးရှငျခွငျး၊ကို ရှေးဦးပွု၍ ပွောဆိုခွငျး၊ (၇) မိတဘာဏီ = မပိုမလှနျခငျြ့ခြိနျ၍ ပွောဆိုခွငျး၊ (၈) အတုရိတဝါဒီ = အဆော